Dagaalka Yemen: Dowladda iyo kooxda goonni ugoosadka oo ku heshiiyay in dagaalka la soo afjaro | Hangool News
Dagaalka Yemen: Dowladda iyo kooxda goonni ugoosadka oo ku heshiiyay in dagaalka la soo afjaro
November 6, 2019 - Written by Hangool
Dowladda Yemen ayaa waxa ay saxiixday heshiis awood qaybsi ah oo ay la gaartay kooxda goonni ugoosadka ah ee ku sugan koonfurta dalkaas, arrintaas oo looga gol leeyahay sidii lagu soo afjari lahaa dagaalka labadaasi dhinac u dhaxeeyay bilooyinka.
Labada dhinac ayaa waxa ay qeyb ka yihiin xulafada ay hor kacayso Sucuudiga ee dalalka badan ka kooban taas oo dagaal kula jirtay fallaagada Xuutiyiinta tan iyo 2015.
Hasayeeshee bishii Agoosto, kooxaha goonni ugoosadka oo ay baritaarayso UAE ayaa waxa ay gacan ku haynta magaalada Cadan kala wareegeen ciidammada dowladda ay taageerto Sucuudiga.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in heshiiskan uu yahay mid muhiim ah, ahna tallaabo loo qaaday sidii loo soo afjari lahaa dagaalka sokeeye ee Yemen.
Qulqulatooyinka halakeeyay dalkaas ayaa waxa ay galaafteen nolosha 7,000 oo rayid ah, sida ay Qaramada Midoobay sheegayso.
Dadka la socda dagaalka Yemen ayaa waxa ay sheegayaan in tirada dhimashada ay intaas aad uga sarreyso.
Yemen: Q.M oo taageeray qorshe Xuutiyiintu soo bandhigeen
Dagaalka Yemen: Xulafada Sacuudiga oo duqaymo ku dilay in kabadan 100 ruux
Yemen: Xoogagga dawladda oo dib u qabsaday Cadan
Hay’adda fadhigeedu uu yahay waddanka Mareykanka ee loo soo gaabiyo ACLED ayaa todobaadkii hore waxa ay sheegtay in ay diiwaangelisay in in ka badan 100,000 oo qof ay waxyeelo ka soo gaartay dagaalka, kuwaas oo ay ku jiraan 12,000 oo dilay intii uu dagaalku socday.
Dagaalka ayaa waxa uu horseedday dhibaatada gargaar ee ugu xun caalamka.
Shan meelood oo afar meel dadka dalkaas – oo ah 24 milyan oo qof – ayaa waxa ay u baahan yihiin gargaar iyo in la ilaaliyo, oo ay ka mid yihiin 10 milyan oo qof oo ku tiirsan cunno gargaar ah si ay u badbaadaan.
Kooxaha goonni ugoosadka oo doonaya in Koonfur Yemen ay xorriyadeeda dib ula laabato, gobolkaas oo ahaa dal goonni ah ka hor inta aanay dib ula midoobin waqooyiga sanadkii 1990, ayaa afar sanadood ka hor waxa ay xulafo la noqdeen madaxweyne Cabdurabu Mansuur Haadi si ay isaga kaashaan in ay Xuutiyiinta ka hor joogsadaan inay qabsadaan magaalada Cadan.
Markaas wixii ka dambeeyayna waxaa u suuragashay inay fallaagada ka saaraan inta badan gobollada koonfurta iyagoo gacan ka helaya isbahaysiga uu Sucuudiga horkacayo, Cadanna waxa ay noqotay goob ku meel gaar ah oo uu ku shaqeeyo golaha wasiirrada ee Mr Haadi.
Image captionHeshiiska ayaa waxa uu qorayaa in ciidammada Sucuudiga ay kor kala socdaan ammaanka gudaha magaalada Cadan
Hasayeeshee bishii Agoosto, ayaa kooxda goonni ugoosadka ee Golaha ku meel gaarka ah ee Koonfurta (STC) waxa ay ku soo jeesatay madaxweynaha, oo ay ku eedaysay in dowladdiisu ay si khaldan wax u maamushay iyadoo dhanka kalana dhaleecaysay xiriirka uu la leeyahay kooxaha islaamiyiinta.
Kaddib maalmo ay socdeen dagaallo lagu hoobtay ayaa maleeshiyaad gacan saar la leh kooxdaas waxa ay gacan ku haynta magaalada Cadan kala wareegeen ciidammadii daacadda u ahaa dowladda.
Markii ay dowladda isku dayday inay dib u qabsato magaaladana Imaaraatka Carabta ayaa cirka ka duqeeyay.
Sucuudiga ayaa waxa xabbad joojin ka dhex sameeyay labada dhinac ka hor inta uusan qaban wadahallada Talaadadii horseeday in heshiiska la gaaro.
Nuqul ka mid ah heshiiska oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxa uu ku baaqayaa in muddo 30 maalmood gudaheed ah lagu sameeyo gole wasiirro oo cusub oo ay waqooyiga iyo koonfurta leeyihiin xubno siman.
Kooxdan STC ayaa sidoo kale waxaa loo ogolaanayaa wadahadalkasta oo ay garwadeen ka tahay Qaramada Midoobay ee lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka sokeeye.
Dagaalyahannada labada dhinac ayaa waxaa la hoosgayn doonaa hogaanka wasaaradaha gaashaandhigga iyo arrimaha gudaha, halka ciidammada Sucuudigu ay kor kala soconayaan ammaanka gudaha magaalada Cadan, sida ay ku warramayso Reuters.
Imaaraatka Carabta oo ciidamadiisa kala baxayay dalka Yemen tan iyo bishii July, ayaa gacan ku haynta magaalada Cadan waxa uu bishii la soo dhaafay ku wareejiyay kooxdaas.